TPS Soomaaliya | Maxaad samayn kartaa haddii aad TPS waxaa dhacayo? | USAHello
TPS Soomaaliya - waxa aad samayn karto haddii aad TPS dhacayo?
Halkan waxaa ku qoran macluumaad ku saabsan TPS dadka ka Soomaaliya.
TPS Soomaaliya - marka ma aan TPS dhacayo?
TPS Soomaaliya - Dawladda Maraykanka ayaa sheegay in on July 19, 2018, in TPS ee Soomaaliya ayaa lagu kordhiyay ilaa March 17, 2020. Faahfaahin dheeraad ah waa in this Register Federaalka ogaysiis.
Haddii aad tahay qof ka Soomaaliya oo ay leeyihiin TPS, aad loo baahan yahay in dib-u-diiwaan inta lagu jiro mudada dib-u-diiwaangelinta 60-maalin ah in waddaa ka Aug. 27, 2018 iyada oo loo marayo Oct 26, 2018. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kordhinta this for TPS Soomaaliya ku jira bogga USCIS TPS Soomaaliya.
Si aad u diiwaangeliso ama dib-u-diiwaan TPS waa in aad soo gudbiso Foomka I-821, Codsiga Aqoonsi Badbaadin Ku meel. Raac tallaabooyinka loogu talagalay dib-u-diiwaangelinta on this page USCIS. Tag tab ah “Maxaa si aad u gudbiso.” Ka dibna tag ah TPS Soomaaliya page dooro tab ah “Halkee si aad u gudbiso.” Dooro mid ka mid ah cinwaanada in uu soo diro codsigaaga.
Maxaa ku saabsan oggolaanshaha shaqada?
USCIS ayaa si toos ah u kordhiyay waraaqaha oggolaansho shaqo (EAD) waayo, TPS Soomaaliya ilaa March 16, 2019. Haddii USCIS-mariyay codsigaaga dib-u-diiwaangelinta TPS, waxay kuu soo saari doonaa EAD cusub oo kuu ogolaanaya in aad shaqada ilaa March 17, 2020.
USCIS aqbalo diiwaangelinta ama dib-u-diiwaangelinta codsiga soo daahay haddii aad qabto cudurdaar fiican. Tag ah USCIS TPS macluumaadka bogga riix “Gudbinta dambe” si aad u ogaato haddii aad u qalanto.
Haddii TPS dhacayo, aad sharci ku laaban doonaa waxa ay hore u ahayd. Waxaad codsan kartaa in aad bedesho xaaladdaada ama aad ka bixi kartaa Maraykanka. Tan waxaa lagu magacaabaa hagaajinta xaaladdaada.
Si aad ula socodsiisid kartaa dhammaan macluumaadka cusub. Waxaad baran karo oo ku saabsan fursadaha aad iyo naftaada iyo qoyskaaga aad isugu diyaariso tallaabada xigta.
Sida loola xidhiidho safaarada Soomaaliya ee USA
Waxaad ka heli kartaa iyowebsite dalka Mareykanka safaaradda halkan.
Cinwaanka safaarada waa 1705 DeSales St NW, aad 300, Washington DC 20036.
lambarka taleefanka waa: (202) 296-0570.